Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana ho an'ny 9-14-21 - iHorror
Home Sarimihetsika mahatsiravina Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 9-14-21
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 9-14-21
by James Jay Edwards Septambra 14, 2021
by James Jay Edwards Septambra 14, 2021 175 hevitra
Hey Tightwads! Andro talata indray izao, ary midika izany fa sarimihetsika maimaim-poana avy amin'ny Tightwad Terror Talata! Boo!
Night of the Demons (1988), nahazoana lalana avy tamin'ny International Film Marketing.
Alin'ny demonia dia momba ny tovovavy voaroaka iray izay manipy fety amin'ny alin'ny Halloween, ary ny ankizy malaza rehetra dia nanatona azy satria tao amin'ny tranom-paty efa nilaozana ilay antoko. Mazava ho azy fa voaantso ny demonia ary maty ny zatovo.
Aiza no hanombohana amin'ity iray ity? Izy io dia iray amin'ireo sehatra tsy hay hadinoina indrindra tamin'ny asan'ny mpanjakavavin'i Linnea Quigley nikiakiaka, iray izay misy tabilao lokomena sy faritra akaiky amin'ny vatana. Izy io koa dia nahazo fonosana very saina izay tsy misy ifandraisany amin'ny fitantarana lehibe. Manampia sary mihetsika vitsivitsy momba ny fanokafana, ary hahazo mpandresy ianao. Alin'ny demonia dia naverina tamin'ny 2009, fa afaka mahita ny kilasika 1988 tany am-boalohany ianao Eto amin'ny ShoutFactoryTV.
Grizzly (1976), avy amin'ny fanajana ny Film Ventures International (FVI).
Amin'ny taona manaraka valanorano, toa ny studio kely rehetra any Hollywood dia nanao sarimihetsika lehilahy vs. bibidia ho fitadiavam-bola, fa ny 1976's Grizzly miavaka amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra. Ny sarimihetsika dia dika mitovy amin'ny beat-for-beat fotsiny valanorano, manolo ny antsantsa amin'ny bera ary ny ranomasina amin'ny ala - GrizzlyNirehareha mihitsy aza ny afisy fa ny orsa dia manana «Valan-jaza mampidi-doza indrindra eto an-tany».
Notarihin'i William Girdler (izay nanao ihany koa Andron'ny biby ary The Manitou), Grizzly mahazo doka fanampiny amin'ny fampiasana orsa tena izy amin'ny sehatra tsy misy mpilalao sarimihetsika - mazava ho azy, noho ny antony azo antoka, ny seho niaraka tamin'ireo mpilalao dia nampiasa bandy iray tamin'ny akanjo fitondra maharesy lahatra. Ity sarimihetsika goavambe mahafinaritra mahagaga ity dia azo jerena Eto ao amin'ny Tubi TV.
Battle Royale (2000), nahazoana lalana avy amin'ny Anchor Bay Films.
Battle Royale dia momba ny kilasy kilasy mpianatra Japoney izay entina any amin'ny nosy lao iray ary omena fitaovam-piadiana sy torolàlana hiady mandra-paha-iray sisa velona. Ka eny, amin'ny ankapobeny The Hunger Games, saingy niverina tamin'ny 2000.
Masiaka sy apokaliptika, Battle royal tokony tena ho raisina ho fijerena tena ilaina, indrindra ho an'ireo mpankafy Ny lalao mampidi-doza indrindra-tsikotra voatafika. Raha izany ianao dia omeo tsara izany Eto ao amin'ny Vudu.
The Village (2004), nahazoana lalana avy amin'i Buena Vista Pictures.
The Village dia vanim-potoana iray momba ny tanàna lavitra iray izay misy eo afovoan'ny ala Pennsylvania. Ny mponina dia manana fahatakarana amin'ireo biby goavam-be izay monina any anaty ala - mijanona ao an-tanànany izy ireo, ary avelan'izy ireo irery. Natao fanamby ny fifanarahana rehefa nanapa-kevitra ny iray amin'ireo mponina fa hangataka vatsy avy amin'ny tanàna akaiky azy ireo izay inoany fa efa tafavoaka ny ala (nefa mbola tsy nisy olona nalehany).
Ity flick an'ny M. Night Shyamalan tamin'ny 2004 ity dia natsatoka tamin'ny famoahana azy, saingy nahagaga ihany izany androany. Tamin'io fotoana io tamin'ny asany, Shyamalan dia trano famokarana herinaratra, noho izany ny mpilalao dia manana anarana toa an'i Sigourney Weaver, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Judy Greer, ary Brendan Gleeson. Oh, ary eny, misy fiovana Shyamalaniana. hitady The Village Eto ao amin'ny TubiTV.
The Last Days on Mars (2013), nahazoana lalana avy amin'ny Magnet Releasing.
Ny andro farany any Mars
Tahaka ny manondro ny anarana, Ny andro farany any Mars dia momba ny andro farany amin'ny dia iray siantifika amin'ny planeta Mars. Eo am-piomanana hody dia mino ny iray amin'ireo mpahay siansa fa nahita porofo momba ny fiainana izy, ary nivoaka hanangona santionany bebe kokoa. Nanjavona izy, ary tsirairay avy, dia toy izany koa ny ambin'ilay vondrona. Ireo sisa dia mila manapa-kevitra raha hanandrana mitady mpiara-miasa aminy, na mamonjy ny tenany fotsiny ary mody tsy misy azy ireo.
Ny andro farany any Mars dia sarimihetsika mahazatra momba ny habakabaka mitokana eny an-tsisin'ny Moon or The Martian, fa miaraka amin'ny bonus fanampiny mety ho biby goavam-be Martiana. Ny mpilalao tsy mampino dia ahitana an'i Liev Schreiber, Romola Garai, Olivia Williams, Elias Koteas, Johnny Harris, Goran Kostic, Tom Cullen, ary Yusra Warsama. Sambory Ny andro farany any Mars Eto ao amin'ny Crackle.